Ukuvakasha kwendlovukazi i-Australia 2019: Izinganekwane azifi | TeraNews.net
Ukuvakasha kwendlovukazi i-Australia 2019: Izinganekwane azifi
umbhali Izindaba zikaTera Kushicilelwe ku 08.04.2019
Ngemuva kokukhishwa kwefilimu ethi “Bohemian Rhapsody,” u-Queen uphinde wangena eshadini le-TOP labaculi abadumile emhlabeni jikelele. Izingoma ezidumile zizwakala emisakazweni emhlabeni wonke. Futhi abathandi bomculo baba nesithakazelo emidlalweni yekhonsathi yeqembu. Uhambo lweNdlovukazi i-Australia 2019 - uhambo olukhulu ongaphuthelwa ngalo.
Kuhlelwa ukuvakasha okukhulu konyaka we-2019-2020 ezinkundleni zemidlalo e-Australia. Izingoma zeFreddie Mercury enkulu zizokwenziwa ngudokotela wamazwi u-Adam Lambert. “I-Rhapsody Tour” yilokho izintatheli zase-Australia zikubize ngokuthi uhambo oluhleliwe.
Ukuvakasha kwendlovukazi i-Australia 2019
Izingoma ze-Cult kanye nokusebenza okubonakalayo okunamandla kuthenjiswa yiNdlovukazi kubathandi bamatshe base-Australia. Abadlali bathembisa isimo esihle emphakathini futhi bazimisele ngokunqoba abantu abasha abangajwayele ukuqanjwa kweqembu.
Amathikithi wokuvakasha e-Australia 2019 azothengiswa ngo-Ephreli 15. Ama-oda wangaphambilini, abagqugquzeli bemicimbi batusa ukuthi kwenziwe eTicketek. Umculo obukhoma, izingoma ezidumile, ukusebenza okujabulisayo - konke okuhle kubalandeli beNdlovukazi.
IBohemian Rhapsody ifilimu ephakeme kunayo yonke eyake yaba khona e-Australia. Inani lokuqopha: 55 dollars dollars. Izindlovukazi zase-Australia zithanda kakhulu, okusho ukuthi zilindele ngabomvu ukuhlala amakhonsathi ezinkundleni zezwe.
I-Beelink GT-KING PRO 2021 ene-Wi-Fi 6
Ukubuyekezwa kwe-G20S PRO - I-Cool Gyroscope Remote nge-Backlight
I-Honor Smart Screen X1 - 75 amayintshi ngo- $ 900
Isithunywa seWhatsApp esivuza imininingwane ye-Facebook?
ILamborghini Countach noFerrari 308 - isipho kumzukulu wakhe
Ikhala le-elekthronikhi le-Smartphone
I-ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 Gundam